ရည်းစားဟောင်းကို လွမ်းနေတဲ့အချိန် လုံးဝနားမထောင်သင့်တဲ့ သီချင်း (၆) ပုဒ် - For her Myanmar
အချစ်သစ်ပင်ဆိုတာလည်း သူ့ဘက်က အမြစ်ကနေစပြီး ဘာမှမကျန်အောင် နှုတ်သွားတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က တစ်စတစ်စ အမြစ်တွေ ပိုပွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မလား?
ဘဝမှာ သိပ်ချစ်ရပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခွဲခွာနေရတဲ့ ချစ်သူတွေ ရှိကြမှာပဲနော်။ သူကတော့ ဘဝအသစ်တစ်ခုကို ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက် လက်ကိုတွဲ လှလှပပနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီး နေနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ပေါင်းများစွာ…. သူ့နာမည်လေး လေသံလောက် ကြားလိုက်ရုံနဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံတစ်ခြမ်းက အောင့်တက်လာတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးထဲမှာပါတဲ့ သီချင်း (၆) ပုဒ်ကို ယောင်လို့တောင် နားမထောင်သင့်ပါဘူးနော်။
(၁) “I Don’t Wanna See You with Her” by Maria Mena
‘They say u haveanew love. I’m happy for u girl. I just don’t wanna meet her.’ ‘သူတို့တွေပြောကြတာတော့ မင်းမှာ ကောင်မလေးအသစ်တစ်ယောက်ရှိနေပြီ၊ ငါမင်းအတွက်ပျော်ပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ကို မင်းနဲ့အတူမတွေ့ချင်ဘူး။’ အို… ဘယ်လိုတောင် ထိရှတဲ့ စာသားလေးလဲ။ သူပျော်နေရတာမြင်လို့ ကိုယ်လည်းပျော်ပေမဲ့ အဲဒီအပြုံးတွေကို ယူဆောင်ပေးတဲ့ ကောင်မလေးကိုလည်း ကိုယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့ အတူတူတွဲသွား တွဲလာနေတာကို မမြင်ချင်ပါဘူးတဲ့။ ဒီခံစားချက်ကို ကိုယ်ချစ်တဲ့လူ ဘဝအသစ်စနေပြီဆိုတာ သိတဲ့အချိန် ခံစားဖူးကြမှာပါ။
(၂) “Happier” by Ed Sheeran
ကိုယ့်ရည်းစားက ကိုယ်နဲ့လမ်းခွဲပြီး တစ်လလောက်အကြာမှာ တခြားတစ်ယောက်ဘေး ပြုံးပျော်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန် အလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်ရတဲ့ သူ့ခံစားချက်ကို ဒီသီချင်းထဲမှာ ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ‘ငါမင်းကိုနာကျင်စေသလိုမျိုး တခြား ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်က နာကျင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ မင်းက ငါ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ထိုက်တန်တာ ငါသိပေမဲ့ ငါမင်းကိုချစ်နေတုန်းပဲ’ (‘Ain’t nobody hurt u like I hurt u. Ain’t nobody need u like I do. I know that there’s others that deserve u. But darling I’m still in love with u’) ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပါအဝင် တခြားစာသားလေးတွေကလည်း ယောင်းတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ရင်အုံကို ဆစ်ကနဲ အောင့်စေမှာပါ။
(၃) “Feel Me” by Selena Gomez
လူငယ်တွေ အသည်းစွဲ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးရဲ့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Selena လေးကလည်း ဒီသီချင်းကို တရားဝင်မထုတ်ထားပေမဲ့ ရှိုးပွဲတစ်ခုမှာ သူ့ရင်တွင်းခံစားချက် အလုံးစုံကို ပျော်ဝင်ပြီး နှလုံးသားနဲ့ ရင်း ရေးထားတာပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တခြားရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော်နေမယ့် ချစ်သူက သူ(မ)မဟုတ်တဲ့ တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ နမ်းတဲ့အချိန်၊ သူ(မ)မဟုတ်တဲ့ တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွဲကတဲ့အချိန် အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ သူ့ရင်ထဲကိုဝင်ပြီး ခဏခံစားကြည့်ပေးပါ (Everytime your lips touch another, I want u to feel me. Everytime u dance with somebody, I want u to feel me)လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နင့်နေအောင်ခံစားနေရတဲ့ သူ့ရင်ဘတ်ကြီးကို ခဏငှားလိုက်ချင်ပုံပါပဲ။
Related Article >>> ဒီသီချင်းတွေကို နားမထောင်ဖူးသေးရင် ယောင်းတို့ တော်တော်ခေတ်နောက်ကျနေပြီနော်
(၄) “Stay” by Miley Cyrus
‘Well I tried to live without u, but tears fall from my eyes. I’m alone & I feel empty. God I’m torn apart inside’ (မင်း မရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာ ငါနေတတ်အောင်နေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မျက်ရည်တွေကတော့ တစ်လိမ့်လိမ့်ကျနေတုန်းပဲ၊ ငါအရမ်းအထီးကျန်ပြီး ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်း စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲကွာ။) ဒီသီချင်းလေးကတော့ မိုင်လေးရဲ့ သီချင်းဟောင်းဆိုပေမဲ့ တော်တော်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ကိုယ့်အမှားတွေကြောင့် သူ့ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့ တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် သူ့ကိုပိုချစ်ပြီး သူမရှိရင် မနေတတ်တော့တဲ့ဘဝမှာ နေသားမကျတော့တဲ့အကြောင်း၊ တောင်းဆုတစ်ခုပြုရရင် သူ့ကိုပဲ ပြန်လိုချင်ကြောင်း ဆို့နင့်ပြီး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်လေး အသံကလည်း သီချင်းထဲမှာ အက်ကွဲကွဲနဲ့မို့ နှင်းတောင်နားထောင်ရင်း မျက်ရည်တွေဝဲလာရတယ်။
(၅) “My Immortal” by Evanescence
အမျိုးသမီး Rock အဆိုရှင် Evanescence ရဲ့ အသည်းကွဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ‘မင်းထွက်သွားပြီဆိုတာကို လက်ခံဖို့ ငါ့ကိုယ်ငါ အကြိမ်ပေါင်းထောင်သောင်းမက ပြောခဲ့ပေမဲ့ ငါ့အတွေးထဲမှာတော့ မင်းကို ငါနဲ့အတူရှိနေသလိုပဲခံစားနေရသေးတယ်။’ (I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone. But though you’re still with me. I’ve been alone all along) အဲဒီစာသားအရတော့ အပြင်မှာ ကိုယ်က သူ့အနားရှိမနေနိုင်တော့ပေမဲ့ အတွေးထဲမှာတော့ သူ့အနားပဲ ကပ်တွယ်နေမိတာကြောင့် ရူးမတတ် စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်း ပြောထားတာပါ။ သီချင်းခေါင်းစဉ် My Immortal ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်း ‘ငါ့ရဲ့ ထာဝရမသေနိုင်သော’ တဲ့။
(၆) “My Dilemma” by Selena Gomez
‘Here’s my dilemma. One half of me wants ya. And the other half wants to forget’ (မင်းကငါ့ရဲ့ ဝေခွဲမရတဲ့ နာကျင်မှုပါပဲ။ တစ်ဘက်မှာတော့ မင်းဆီက ပြေးထွက်ချင်ပေမဲ့ တစ်ဘက်မှာတော့ မင်းကိုငါ မခွဲခွာနိုင်ဖြစ်နေတယ်။) ဆက်သွားရမလား၊ ရောက်တဲ့နေရာမှာ တန့်နေရမလားဆိုပြီး ဝေခွဲမရတဲ့ ဒွိဟကြားမှာ တစ်ယောက်တည်း တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း စပ်ဆိုထားတာပါ။ ကိုယ့်ကို လိမ်နေမှန်း သိသိလျက်နဲ့ ကိုယ့်ကို ထိခိုက်မှာဆိုးလို့ လိမ်ခဲ့တာဆိုပြီး အကောင်းအဆိုး ကြား ဗျာများနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို သူများတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်သလို ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> စိတ်အားတက်ကြွစရာ အင်္ဂလိပ်သီချင်းများ
ဒီသီချင်း (၆) ပုဒ်ကတော့ ထင်ထားသလောက် မကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သီချင်းကောင်းတွေပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူက တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပျော်နေတာကို တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခ၊ သံယောဇဉ် မကုန်သေးတဲ့ဘဝမှာ သူ့ကို အရင်လို အနားမှာပြန်ရှိစေချင်တဲ့ ဒုက္ခ၊ သူနဲ့ကိုယ် ကွဲကွာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ သူကအမြစ်တွယ်ပြီး စိုက်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကို ရေးဖွဲ့ထားတာမို့ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီက ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲကို စူးနစ်ပြီးဝင်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် အတိတ်နွံထဲကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးဘဲ သက်ဆိုင်သူကို သတိရနေသေးတယ်ဆိုရင် ဒီသီချင်းတွေကို နားမထောင်ပါနဲ့နော်။
ကိုယ်က အတိတ်တွေထဲမှာ ပိတ်မိပြီး အချစ်သစ်လည်းမရှာ၊ အချစ်ဟောင်းကိုပဲ လွမ်းတသသဖြစ်ပြီး စင်ဂယ်လ်ဘဝမှာ ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်၊ ချစ်သူများနေ့မှာ ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကို ပြန်သတိရနေနိုင်တယ်လို့ ထင်ရင် အက်ဒ်မင်တို့ For Her Myanmar က လုပ်မယ့် Singles’ Night ပွဲလေးကို လာခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… ပွဲကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ဆီဒိုးနားမှာ လုပ်မှာပါနော်.. အသေးစိတ်ကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ကြည့်လို့ရပြီး ပွဲတက်မယ်လို့ စဉ်းစားရင်တော့ ဒီလင့်ခ်လေးမှာ Register လုပ်လို့ ရပါတယ်လို့…
အခဈြသဈပငျဆိုတာလညျး သူ့ဘကျက အမွဈကနစေပွီး ဘာမှမကနျြအောငျ နှုတျသှားတတျတယျဆိုပမေဲ့ ကိုယျ့ဘကျက တဈစတဈစ အမွဈတှေ ပိုပှားတာမြိုးဖွဈတတျတယျမလား?
ဘဝမှာ သိပျခဈြရပမေဲ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ခှဲခှာနရေတဲ့ ခဈြသူတှေ ရှိကွမှာပဲနျော။ သူကတော့ ဘဝအသဈတဈခုကို ကိုယျမဟုတျတဲ့ တခွားမိနျးကလေးတဈယောကျ လကျကိုတှဲ လှလှပပနဲ့ ဖွတျသနျးပွီး နနေိုငျပွီဆိုပမေဲ့ ကိုယျကတော့ ဒဏျရာဒဏျခကျြပေါငျးမြားစှာ…. သူ့နာမညျလေး လသေံလောကျ ကွားလိုကျရုံနဲ့ ဘယျဘကျရငျအုံတဈခွမျးက အောငျ့တကျလာတယျဆိုရငျ ဒီဆောငျးပါးထဲမှာပါတဲ့ သီခငျြး (၆) ပုဒျကို ယောငျလို့တောငျ နားမထောငျသငျ့ပါဘူးနျော။
‘They say u haveanew love. I’m happy for u girl. I just don’t wanna meet her.’ ‘သူတို့တှပွေောကွတာတော့ မငျးမှာ ကောငျမလေးအသဈတဈယောကျရှိနပွေီ၊ ငါမငျးအတှကျပြျောပေးပါတယျ ဒါပမေဲ့လညျး သူ့ကို မငျးနဲ့အတူမတှခေ့ငျြဘူး။’ အို… ဘယျလိုတောငျ ထိရှတဲ့ စာသားလေးလဲ။ သူပြျောနရေတာမွငျလို့ ကိုယျလညျးပြျောပမေဲ့ အဲဒီအပွုံးတှကေို ယူဆောငျပေးတဲ့ ကောငျမလေးကိုလညျး ကိုယျခဈြတဲ့လူနဲ့ အတူတူတှဲသှား တှဲလာနတောကို မမွငျခငျြပါဘူးတဲ့။ ဒီခံစားခကျြကို ကိုယျခဈြတဲ့လူ ဘဝအသဈစနပွေီဆိုတာ သိတဲ့အခြိနျ ခံစားဖူးကွမှာပါ။
ကိုယျ့ရညျးစားက ကိုယျနဲ့လမျးခှဲပွီး တဈလလောကျအကွာမှာ တခွားတဈယောကျဘေး ပွုံးပြျောနတေဲ့ သူ့မကျြနှာကို မွငျလိုကျရတဲ့အခြိနျ အလဲလဲအပွိုပွိုဖွဈရတဲ့ သူ့ခံစားခကျြကို ဒီသီခငျြးထဲမှာ ရေးဖှဲ့ထားတာဖွဈပါတယျ။ ‘ငါမငျးကိုနာကငျြစသေလိုမြိုး တခွား ဘယျတဈဦးတဈယောကျက နာကငျြစမှောမဟုတျပါဘူး၊ မငျးက ငါ့ထကျပိုကောငျးတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ ထိုကျတနျတာ ငါသိပမေဲ့ ငါမငျးကိုခဈြနတေုနျးပဲ’ (‘Ain’t nobody hurt u like I hurt u. Ain’t nobody need u like I do. I know that there’s others that deserve u. But darling I’m still in love with u’) ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပါအဝငျ တခွားစာသားလေးတှကေလညျး ယောငျးတို့ရဲ့ဘယျဘကျရငျအုံကို ဆဈကနဲ အောငျ့စမှောပါ။
လူငယျတှေ အသညျးစှဲ ကမ်ဘာကြျောအဆိုတျောတဈဦးရဲ့ ရညျးစားဟောငျးဖွဈတဲ့ Selena လေးကလညျး ဒီသီခငျြးကို တရားဝငျမထုတျထားပမေဲ့ ရှိုးပှဲတဈခုမှာ သူ့ရငျတှငျးခံစားခကျြ အလုံးစုံကို ပြျောဝငျပွီး နှလုံးသားနဲ့ ရငျး ရေးထားတာပါလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ တခွားရငျခှငျထဲမှာ ပြျောနမေယျ့ ခဈြသူက သူ(မ)မဟုတျတဲ့ တခွားမိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ နှုတျခမျးတှေ နမျးတဲ့အခြိနျ၊ သူ(မ)မဟုတျတဲ့ တခွားမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ တှဲကတဲ့အခြိနျ အဲ့ဒီလိုအခြိနျတှမှော သူ့ရငျထဲကိုဝငျပွီး ခဏခံစားကွညျ့ပေးပါ (Everytime your lips touch another, I want u to feel me. Everytime u dance with somebody, I want u to feel me)လို့ ဆိုထားပါတယျ။ နငျ့နအေောငျခံစားနရေတဲ့ သူ့ရငျဘတျကွီးကို ခဏငှားလိုကျခငျြပုံပါပဲ။
Related Article >>> ဒီသီခငျြးတှကေို နားမထောငျဖူးသေးရငျ ယောငျးတို့ တျောတျောခတျေနောကျကနြပွေီနျော
‘Well I tried to live without u, but tears fall from my eyes. I’m alone & I feel empty. God I’m torn apart inside’ (မငျး မရှိတဲ့ဘဝတဈခုမှာ ငါနတေတျအောငျနဖေို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေဲ့ မကျြရညျတှကေတော့ တဈလိမျ့လိမျ့ကနြတေုနျးပဲ၊ ငါအရမျးအထီးကနျြပွီး ရငျဘတျထဲမှာလညျး စုတျပွတျသတျနတောပဲကှာ။) ဒီသီခငျြးလေးကတော့ မိုငျလေးရဲ့ သီခငျြးဟောငျးဆိုပမေဲ့ တျောတျောကို အဓိပ်ပာယျရှိတဲ့ သီခငျြးလေးပါ။ ကိုယျ့အမှားတှကွေောငျ့ သူ့ကို ဆုံးရှုံးလိုကျရပမေဲ့ တဈရကျထကျ တဈရကျ သူ့ကိုပိုခဈြပွီး သူမရှိရငျ မနတေတျတော့တဲ့ဘဝမှာ နသေားမကတြော့တဲ့အကွောငျး၊ တောငျးဆုတဈခုပွုရရငျ သူ့ကိုပဲ ပွနျလိုခငျြကွောငျး ဆို့နငျ့ပွီး ရေးဖှဲ့ထားတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေး ဖွဈပါတယျ။ မိုငျလေး အသံကလညျး သီခငျြးထဲမှာ အကျကှဲကှဲနဲ့မို့ နှငျးတောငျနားထောငျရငျး မကျြရညျတှဝေဲလာရတယျ။
အမြိုးသမီး Rock အဆိုရှငျ Evanescence ရဲ့ အသညျးကှဲ သီခငျြးတဈပုဒျပါ။ ‘မငျးထှကျသှားပွီဆိုတာကို လကျခံဖို့ ငါ့ကိုယျငါ အကွိမျပေါငျးထောငျသောငျးမက ပွောခဲ့ပမေဲ့ ငါ့အတှေးထဲမှာတော့ မငျးကို ငါနဲ့အတူရှိနသေလိုပဲခံစားနရေသေးတယျ။’ (I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone. But though you’re still with me. I’ve been alone all along) အဲဒီစာသားအရတော့ အပွငျမှာ ကိုယျက သူ့အနားရှိမနနေိုငျတော့ပမေဲ့ အတှေးထဲမှာတော့ သူ့အနားပဲ ကပျတှယျနမေိတာကွောငျ့ ရူးမတတျ စိတျထိခိုကျနတေဲ့အကွောငျး ပွောထားတာပါ။ သီခငျြးခေါငျးစဉျ My Immortal ဆိုတဲ့စကားလုံးကလညျး ‘ငါ့ရဲ့ ထာဝရမသနေိုငျသော’ တဲ့။
‘Here’s my dilemma. One half of me wants ya. And the other half wants to forget’ (မငျးကငါ့ရဲ့ ဝခှေဲမရတဲ့ နာကငျြမှုပါပဲ။ တဈဘကျမှာတော့ မငျးဆီက ပွေးထှကျခငျြပမေဲ့ တဈဘကျမှာတော့ မငျးကိုငါ မခှဲခှာနိုငျဖွဈနတေယျ။) ဆကျသှားရမလား၊ ရောကျတဲ့နရောမှာ တနျ့နရေမလားဆိုပွီး ဝခှေဲမရတဲ့ ဒှိဟကွားမှာ တဈယောကျတညျး တဝဲလညျလညျဖွဈနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျး စပျဆိုထားတာပါ။ ကိုယျ့ကို လိမျနမှေနျး သိသိလကျြနဲ့ ကိုယျ့ကို ထိခိုကျမှာဆိုးလို့ လိမျခဲ့တာဆိုပွီး အကောငျးအဆိုး ကွား ဗြာမြားနတေဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျက သူ့ရငျတှငျးခံစားခကျြတှကေို သူမြားတဈယောကျကို ရငျဖှငျ့သလို ဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> စိတျအားတကျကွှစရာ အင်ျဂလိပျသီခငျြးမြား
ဒီသီခငျြး (၆) ပုဒျကတော့ ထငျထားသလောကျ မကြျောကွားခဲ့တဲ့ သီခငျြးကောငျးတှပေါ။ ကိုယျခဈြတဲ့လူက တခွားမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ ပြျောနတောကို တှရေ့တဲ့ဒုက်ခ၊ သံယောဇဉျ မကုနျသေးတဲ့ဘဝမှာ သူ့ကို အရငျလို အနားမှာပွနျရှိစခေငျြတဲ့ ဒုက်ခ၊ သူနဲ့ကိုယျ ကှဲကှာနပွေီဖွဈပမေဲ့ ကိုယျ့နှလုံးသားထဲမှာ သူကအမွဈတှယျပွီး စိုကျနဆေဲ ဖွဈတဲ့ဒုက်ခတှကေို ရေးဖှဲ့ထားတာမို့ စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီက ကိုယျ့ရငျဘတျထဲကို စူးနဈပွီးဝငျလာမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ အတိတျနှံထဲကနေ ရုနျးမထှကျနိုငျသေးဘဲ သကျဆိုငျသူကို သတိရနသေေးတယျဆိုရငျ ဒီသီခငျြးတှကေို နားမထောငျပါနဲ့နျော။
ကိုယျက အတိတျတှထေဲမှာ ပိတျမိပွီး အခဈြသဈလညျးမရှာ၊ အခဈြဟောငျးကိုပဲ လှမျးတသသဖွဈပွီး စငျဂယျလျဘဝမှာ ယောငျလညျလညျ ဖွဈနတေယျဆိုရငျ၊ ခဈြသူမြားနမှေ့ာ ဒဏျရာဟောငျးတှကေို ပွနျသတိရနနေိုငျတယျလို့ ထငျရငျ အကျဒျမငျတို့ For Her Myanmar က လုပျမယျ့ Singles’ Night ပှဲလေးကို လာခဲ့ကွပါလို့ ဖိတျချေါပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… ပှဲကတော့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ ဆီဒိုးနားမှာ လုပျမှာပါနျော.. အသေးစိတျကို သိခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီလငျ့ချလေးမှာ ကွညျ့လို့ရပွီး ပှဲတကျမယျလို့ စဉျးစားရငျတော့ ဒီလငျ့ချလေးမှာ Register လုပျလို့ ရပါတယျလို့…
Tags: Fun, heartbreaking, Listen, Music, sad, songs
Hnin Ei Oo July 3, 2018